Edemede Mahendra Alladi na Martech Zone |
Edemede site na Mahendra Alladi
Mahendra bụ Onye guzobere na onye isi nke accelQ, usoro nyocha nke igwe ojii nke na-aga n'ihu na-akpaghị aka na-akpaghị aka API na ule weebụ na-edeghị otu akara koodu.
Iji Ule Na-akpaghị Aka iji Meziwanye Ahụmịhe Ahịa Ahịa
Tuesday, August 4, 2020 Tuesday, August 4, 2020 Mahendra Alladi
Nọ n'ihu mgbanwe ngwa ngwa na ite na nnukwu ụlọ ọrụ na-emepụta ngwa ahịa, dịka Salesforce, nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Mana Salesforce na AccelQ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji merie ihe ịma aka ahụ. Iji AccelQ's agile quality management platform, nke jikọtara ya na Salesforce, na-emewanye ngwangwa ma melite ogo nke nsụgharị nke Salesforce. AccelQ bụ ụlọ ọrụ ikpo okwu na-arụkọ ọrụ ọnụ nwere ike iji rụọ ọrụ, jikwaa, gbuo, na nyochaa ule Salesforce. AccelQ bụ naanị ule na-aga n'ihu